समृद्धि बहसः बजारमात्रै होइन, ब्रह्माण्ड नै हत्केलामा राख्ने समय
काठमाडौं, वैशाख ८ । दिनप्रतिदिन सूचना प्रविधिमा भइरहेको विकासले विश्वलाई नै साँघुरो बनाइसकेको यर्थाथ अब नौलो रहेन । तैपनि सूचना प्रविधिले सबैखाले सञ्चार क्षेत्रमा सुधारको साथै परिमार्जित भएर पनि आउने क्रममा छ । सोही कारणले गर्दा यसको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
समग्र प्रविधि क्षेत्रको सर्वस्वीकार्य विधा सूचना प्रविधि देश विकासको मेरुदण्ड नै बनेको छ । दैनिक जीवनमा सूचना प्रविधि हावी भएकोले मानिसको दैनिकी नै फेरिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सूचना प्रविधि बहुउपयोगी वस्तु भइसकेको अवस्था छ । होटल, कृषि, बैंकिङ, बिमा, स्वास्थ्य, सञ्चा लगायतको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले अहम् भूमिका खेलिरहेको छ ।
यी क्षेत्रहरुले पछिल्लो समय आफ्नो वस्तु तथा सेवाको जानकारी हत्केलामा ल्याइसकेको अवस्था छ । प्रायः ठूला तथा मझौला कम्पनीहरुले मोबाइल एप्समार्फत वस्तु तथा सेवाको बिक्री गरिरहेका छन् । यसमा साना व्यवसाय गर्नेहरु पनि अछुत्तो छैनन् ।
करिब १० वर्ष अघिको स्थितिलाई फर्केर हेर्ने हो भनेपनि हामीले यो क्षेत्रमा फड्को मारिसक्यो । तर, अझै बढ्नु छ अगाडि । फर्केर हेर्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ रहेपनि अन्य देशहरुलाई हेर्दा हामी निकै पछाडि नै छौं ।
आर्थिक समृद्धिको नाममा नेपालमा सूचना प्रविधिको व्यापक विकास हुनुपर्छ भनेर बहस पनि हुने गरेको छ । केही परियोजनाहरु तथा कार्यक्रमहरु पनि आएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)की नवनियुक्त अध्यक्ष भवानी राणले पदभार ग्रहण गरिरहँदा सरकारको लिस्टमा रहेको स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणलाई सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइन् । यसले के देखाउँछ भने उद्यागी व्यापारीहरुपनि स्मार्ट सिटीको अवधारणमा जानुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । प्रविधिलाई उनीहरुले पनि आत्मसाथ गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो केही वर्ष यता चर्चा पनि यसैको रहेको छ । त्यसोभए स्मार्ट सिटी भएपछि के भइहाल्छ त ? स्मार्ट सिटी हुनु भनेको आर्थिक विकाससँगै सामाजिक परिवर्तन पनि हो । स्मार्ट सिटी भएपछि इन्टरनेटको प्रयोगबाट सबै वस्तु तथा सेवा पाउने भन्ने हो । त्यस्तै त्यसमा वातावरण पनि सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जोडिन्छ ।
स्मार्ट सहर बन्नको लागि हरेक मानिसको मोबाइल या अन्य उपकरणमा इन्टरनेट जोडिनु आवश्यक छ । त्यस्तै ई (विद्युतीय) सुशासन स्थापित भएको, व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, ई–भुक्तानी, आदी पर्छन् । यस्तो परियोजना तत्कालै सुरु गर्नु आवश्यकता छ ।
काभ्रेको बनेपामा ठूलो लगानीमा आईटी पार्कको लागि प्रारम्भिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको वषैं बित्यो तर त्यो अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त पार्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो भनेर सरोकारवाल निकायहरु लागिपरेका छन् तर सम्बन्धित पक्षले त्यसमा चासो दिएको छैन ।
२ सय ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्क निर्माणको लागि ३० करोड भन्दा बढी खर्च भइसक्यो तर आएको कम्पनीपनि पार्कमा टिक्न सकेन । २०६३ सालमा एउटा डच कम्पनी आएर पार्कबाट कामपनि सुरु गरेको थियो तर इन्टरनेट, बत्ति, राजधानी जोड्ने बाटोको समस्या देखाएर कम्पनीले उक्त ठाउँलाई छोड्यो ।
तर हाल बत्तिको समस्या हटिसकेको छ । त्यस्तै बाटो पनि चौडा भइसकेको छ अब बाँकी रह्यो इन्टरनेट त्यसको समाधान गर्न पनि बिभिन्न इन्टरनेट सवाप्रदायक कम्पनीहरु सक्षम भइसकेको छ । जतिसक्दो चाँडो उक्त पार्क सञ्चालनमा ल्याउन सके थुप्रै नेपालीहरुले रोजगारी पाउन सक्छन् । नेपालले पनि आफ्नो सफ्टवेरहरु विदेशमा बित्री वितरण गर्न सक्छन्, साथै नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।
हामी भन्न त भन्छौं नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर प्रायः हरेक कृषिजन्य वस्तुहरु आयात गरिरहनुपरेको विवशता छ । अहिले नेपालमा परम्परागत तरिकाले कृषि उत्पादनमा काम भइरहेको छ । यो कुरालाई सरोकारवालाहरुले पनि उठाएका छन् तर आधुनिकिकरण तर्फ भने ध्यान गएको छैन ।
धेरै परिवारहरु व्यवसायीकताको लागि भन्दापनि आफुलाई पुग्ने हिसावले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भइरहेका छन् । त्यो कार्य पद्धत्तिलाई जतिसक्दो चाँडो हटाएर नयाँ सिप तथा प्रविधि मार्फत व्यवसायीक खेती गरिनु आवश्यक छ ।
आधुनिकिकरणले थोरै ठाउँबाट पनि धेरै उत्पादन दिन सक्छ र साथै काममा सहजता र थोरै जनशक्तिले धेरै उत्पादन गरि नेपालले गरिरहेको आयातलाई घटाउन सकिन्छ ।
हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के भने इजरायलजस्तो देशले नेपाली युवाहरुलाई कृषि सिकाउन वर्षेनि लिएर गएको हुन्छ । तालिमबाट फर्केका युवाहरुको अनुभव सुन्ने हो भने इजरायलले कृषिमा क्रान्ति नै गरेको छ । मरुभुमीजस्तो ठाउँमा पनि उनीहरुले राम्रो उत्पादन गरेका छन् ।
कारण हो कृषिमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग । इजरायलले करिब ७० प्रतिशत कृषि उत्पादन अमेरिका, युरोप लगायतको देशमा तरकारी तथा फलफुल निर्यात गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि अनलाईनबाट तराकारी खरिद बिक्री हुन थालिसकेको अवस्थामा कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रणालीको विकास नगरी सुखै छैन ।
पछिल्लो समय विद्युतिय सेवाको बारेमा व्यापक हल्लाखल्ला छ । सरकारी कार्यलयहरुमा इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड राख्ने, सेवाग्राहीलाई घरैबाट सेवामा पहुँच दिने, परिचय पत्रहरुलाई डिजिटलाइज गर्न लगायतका कुराहरु खासै अगाडी बढेको पाइँदैन बढेका केही योजनाहरुको हालत पनि लथालिंग अवस्थामा छ ।
जस्तो सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स, प्रचलनमा पनि आयो तर, त्यसको प्रभावकारीता खोई ? ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन साँचै यस्ता कुराहरुबाट देशले या सेवाग्राहीले फाइदा पाउनैपर्छ ।
विकसित मुलुकका कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका जनताहरु कुराकानी गर्दै–गर्दै अर्को काम पनि सम्पन्न गर्ने भइसकेका छन् । सबैमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुपनि सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिइरहेका छन् ।
हाम्रो देशमा पनि पछिल्लो समय अनलाईन सपिङ, अनलाईन पेइमेन्ट, अनलाईन सेवा सुविधाको सुरुवात त भइसकेको छ । तर जतिमात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । अनि इन्टरनेटको महशुदरपनि महँगो छ । यस्ता सेवाहरु प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा धेरै सहजता हुन्छ । आफू बसेकै ठाउँबाट कति कामहरु सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसले समय तथा पैसाको बचत गर्न सक्छ ।
देशमा सूचना प्रविधिको विकास गर्न सर्वप्रथम त शैक्षिक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको ज्ञान हासिल गराउन उद्योगमा प्रयोग हुने व्यावसायिक ज्ञानभन्दा पनि पहिला त सैद्वान्तिक किताबी ज्ञान अनि उक्त आर्जन गरेको ज्ञानलाई प्रयोगात्मक ज्ञानमा प्रतिस्थापन गर्न सके त्यसले उत्पादक परिणाम दिन सक्छ ।
सूचना प्रविधिको अर्को प्रमुख बाधक सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीचको खाडल । सम्पूर्ण उपलब्धताको केन्द्रीकरण र सहरमुखी अवधारणाका कारण ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूलाई प्रविधिको ज्ञान आर्जन गराउन दूरशिक्षाको अवधारणालाई विकास गरी अत्याधुनिक प्रविधिको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।
यसरी सहर र गाउँबीचको खाडल पुर्न सके सूचना प्रविधिको विकासले ठूलोगति लिन सक्छ ।